एक १०-कोर iMac Intel i9 र Radeon Pro 10 Geekbench | मा देखा पर्छ म म्याकबाट हुँ
त्यहाँ केहि छ जुन यस नयाँ चालमा मलाई भागेर जान्छ जुन एप्पल भित्र छिर्छ र यसलाई एप्पल सिलिकन भनिन्छ। म पूरै बुझ्दछु कि तपाईं सबै ईन्टेल म्याकलाई केहिसँग स्थानान्तरण गर्न चाहानुहुन्छ एआरएम सीपीयू मापन गर्न बनेको छ, एप्पलको बाँकी उपकरणहरू जस्तै, र यसले उनीहरूलाई कती राम्रो दिईरहेको छ।
यो परिवर्तन पहिले नै चलिरहेको छ, र हामीले डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी २०२० भन्दा पहिले सोचेको भन्दा बढी उन्नत। वास्तवमा एप्पल पहिले नै शिपिंग गर्दैछ म्याक मिनी एआरएम बीटा विकासकर्ताहरूले तिनीहरूमा कार्यक्रम सुरू गर्न। तर के कुराले मलाई जोड्न सक्दैन कि एप्पल आफैले भने कि यो अझै बजार मा एक नयाँ इंटेल म्याक शुरू गर्न लागिरहेको छ। आज नयाँ Intel iMac पहिले नै Geekbench परिणामहरूमा पत्ता लाग्यो।
प्रयोगकर्ता @rogame ट्विटरमा केहि परिणाम प्रकाशित गरेको छ Geekbench अलि अनौंठो त्यस्ता डाटाले एक अघिल्लो अघोषित iMac मोडल देखाउँदछ जुन हुड अन्तर्गत १०-कोर इंटेल i9 प्रोसेसरको साथ सुसज्जित छ।
मूल रिपोर्टमा भनिएझैं यो एप्पल र यस विशेष म्याक मोडेलका लागि अनुकूलित एप्पल विशेष चिप जस्तो देखिन्छ। जे होस्, सामान्यतया, चिप इंटेल कमेट लेक एस दसौं पुस्ता यस पटक अप्रिल मा पहिलो पटक शुरू भयो।
El कोर I9-10910, एक अप्रकाशित एप्पल iMac उपकरण भित्र पत्ता लगाइएको छ, यसको मतलब यो एक SKU हुन सक्छ कि एप्पल को लागी विशिष्ट हुनेछ। कोर आई family परिवारको सदस्य भएर, सीपीयू अन्य भेरियन्टहरूमा जस्तै समान स्पेसको साथ आउँदछ। यस अवस्थामा, प्रोसेसरसँग १० सीपीयू कोरहरू, २० थ्रेडहरू, र २० एमबी एल c क्यास छ। अन्तिममा, सूचीबद्ध गरिएको घडीको गतिले कुन चाहिं कोर i9-10 आफ्ना भाइबहिनीहरू भन्दा अलग सेट गर्दछ।
गीकबेन्च डाटाका अनुसार कोर i9-10910 घडी फ्रिक्वेन्सीको साथ अपरेट गर्दछ 3,6 गीगा 4,7 GHz मा टर्बो बूस्ट। घडीको गतिले सुझाव दिन्छ कि कोर i9-10910 मूल रूपमा कोर i9-10900 को उल्टो पारिएको छ। गणित गर्दै, कोर i9-10910 कोर i28.6-9 भन्दा एक 10900% उच्च घडी आवृत्ति घमण्ड देखिन्छ।
एक अधिक शक्तिशाली i9 र Radeon
एउटा म्याक मिनी एआरएम पहिले नै विकासकर्ताहरूलाई शिपिंग गर्दैछ र नयाँ इंटेल आई म्याक देखा पर्छ?
गीकबेन्च परीक्षणले हामीलाई यो पनि देखाउँदछ कि त्यहाँ अर्को विशेष टुक्राहरू छन् जुन यो विशेष मेशिन भित्र छ, ग्राफिक्स कार्ड। AMD Radeon Pro 5300 XNUMX००। यसले अधिकतम घडीको गति १,1.650 of० मेगाहर्ट्ज फिचर गर्न सक्दछ, र GB जीबी जहाजको मेमोरी हुन सक्छ।
यस GPU को डेस्कटप रूप हो Radeon प्रो 5300 XNUMX००M त्यो एएमडी गत वर्ष घोषणा गर्‍यो। यहाँ मात्र नकारात्मक पक्ष यो छ कि जब यो नयाँ आईम्याक प्रस्तुत गरिन्छ, यो विशेष कन्फिगरेसन अधिक महँगो भेरियन्टहरूको लागि आरक्षित हुन सक्छ।
हुन सक्छ यो महिना घोषणा गरियोयस वर्षको विश्वव्यापी विकासकर्ता सम्मेलनमा एप्पलले नयाँ डेस्कटप देखाउँदैछ भन्ने कुरा हल्ला भएको थियो र त्यो अन्तमा देखा परेन भन्ने कुरालाई विचार गर्दै।
हामी यो पनि सोच्न सक्दछौं कि को खुशीयामी महामारी को कारण कोरोनाभाइरस यो नयाँ iMac केहि समयको लागि ढिला भयो, र जुलाई वा अगस्ट सम्म देखा पर्दैन। तर त्यसो त रक्तपातपूर्ण प्रश्न यो हो: के एप्पलले पहिलो एआरएम म्याकहरू भन्दा केहि महिना अगाडि इंटेल आई म्याक रिलीज गर्नेछ? अनौंठो, अनौंठो…।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » अफवाहहरु » नयाँ १०-कोर इंटेल i9 iMac र Radeon प्रो 10 Geekbench मा देखा पर्दछ
नयाँ "EvilQuest" ransomware पाइरेटेड म्याकोस अनुप्रयोगहरूमा सर्कुलेट गर्दछ